တရုတ်စီးရီးသည်အသိဉာဏ်ရှိသောစားနပ်ရိက္ခာပလက်ဖောင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | Baiyi
ထုတ်ကုန်အမည်: စံအသိဉာဏ်နို့တိုက်ကျွေးရေး & ပုံနှိပ်ပလက်ဖောင်း
စံပြ BY-TF01 / 02-400; BY-TF01 / 02-400 'ခရမ်းလွန်'; BY-HTF01 / 02-400; BY-HTF01 / 02-400 (ခရမ်းလွန်); BY-MTF02-650(မော်ဒယ်ငါးခု)
အသွင်အပြင်:၎င်းသည်ပုံမှန်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်တီထွင်ထားသည် (TIJ ပရင်တာ၊ HD DOD၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစသည်) ။ ၎င်းသည်နည်းပညာ၊ ပြည့်စုံခိုင်မာပြီး၊ ဒါဟာအသိဉာဏ်, modular, ပုံစံအသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းကိုအယူအဆချမှတ်သည်။ စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ ကတ်၊ ထုပ်ပိုးသေတ္တာအမျိုးအစားများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ကုန်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်နှစ်ဆထောက်လှမ်းခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အသိဥာဏ်မြင့်မားသောနို့တိုက်ကျွေးရေးပလက်ဖောင်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လိုအပ်ချက်မြင့်မားစွာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ အားလုံးသည် streamline အလုပ်လုပ်သော mode နှင့်အသိဉာဏ်ကျွေးမွေးမှု modular ချမှတ်သည်။ မြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်း၊ တည်ငြိမ်မှုကောင်းသော၊ လည်ပတ်မှုကောင်းမွန်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက်သာမကသင့်အသုံးပြုသူလည်ပတ်မှုအတွက်လည်းကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ အသုံးပြုမှုတည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်ဤပလက်ဖောင်းသည်စွမ်းအားမြင့်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပထမတန်းစားအမှတ်တံဆိပ်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။
၎င်းတွင်ပစ္စည်းများစွာပိုင်ဆိုင်သောမူပိုင်ခွင့်နည်းပညာရှိပြီးတိကျသည့်လုပ်ငန်းစဉ်နည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအားသာချက်ကိုရရှိစေသည့်တိကျသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများကိုကျင့်သုံးသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်လွှာအရ, ထုတ်ကုန်ငါးခုရှိပါတယ်：
1. စံအသိဉာဏ်ပုံနှိပ်ပလက်ဖောင်း (မော်ဒယ်: BY-TF01 / 02-400);
2. စံအသိဉာဏ်နို့တိုက်ကျွေးရေး & V ကိုပုံနှိပ်ပလက်ဖောင်း (မော်ဒယ်: BY-TF01 / 02-400 (ခရမ်းလွန်));
၃။ မြန်နှုန်းမြင့်အသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း (ပုံစံ - BY-HTF01 / 02-400);
4. မြန်နှုန်းမြင့်အသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း (ပုံစံ - BY-HTF01 / 02-400 (UV));
၅။ Multi-channel အသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း (Model: BY-MTF02-400)
"စံအသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း" နှင့် "အသိဉာဏ်ရှိသောကျက်စားခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း" အကြားအများဆုံးကွာခြားချက်မှာလျှောက်လွှာအခါသမယဖြစ်သည်။ Standard အသိဥာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းသည်ပုံမှန်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ကိုက်ညီပါသည်။ TIJ, CIJ, Laser စသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အသိဉာဏ်မြင့်မားသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် UV ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်နှင့်ကိုက်ညီသည့်ကုသခြင်းစခန်းများအတွက် Palsma တပ်ဆင်ထားသည်။ နည်းပညာအပေါ်ခြားနားချက်ရှိပါတယ်။
"မြန်နှုန်းမြင့်အသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း" နှင့် "မြန်နှုန်းမြင့်အသိဉာဏ်ကျက်စားခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း" တို့သည်စံပလက်ဖောင်းပေါ် အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ မြန်နှုန်းမြန်သည်၊ တည်ငြိမ်မှုအားကောင်းသည်။ စက်ကိုယ်ထည်သည်သံမဏိသို့မဟုတ်ကာဗွန်စတီးကိုဆေးသုတ်။ အရောင် (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်)၊ အပြည့်အဝပါ ၀ င်သည့်ဒီဇိုင်း၊ ပိုမိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ။ ဤရွေ့ကားအမျိုးအစား ၄ မျိုးသည်ခိုင်မာသောကိုယ်ထည်နှင့်တိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ၄ င်းတို့ကို double detection system, auto-rectify system, visual inspection system, auto-rejection system စသည့် optional function များတပ်ဆင်ထားနိူင်တယ်။ ဤရွေးချယ်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိုမိုအသိဥာဏ်ရှိပြီးမောင်းသူမဲ့ဖြစ်စေသည်။
Multi-channel အသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းသည်ပလက်ဖောင်းကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုနှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောထုတ်ကုန်များရှိသည်။ လူတို့သည်နို့တိုက်ကျွေးရေးယူနစ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသောချန်နယ်တစ်ခုသို့ညှိပြီးထုတ်ကုန်ကြီးများနှင့်ကိုက်ညီအောင်ညှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. စံအသိဉာဏ်နို့တိုက်ကျွေးရေး & ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း
1. စံအသိဉာဏ်နို့တိုက်ကျွေးရေး & ပုံနှိပ်ပလက်ဖောင်း
အေအတိုင်းအတာ: L ကို * W * H ကို = 3000 * 763 * 820mm
ခအလေးချိန် - ၁၅၀-၂၀၀ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည်
Power စွမ်းအား - ၂ ကီလိုဝပ်ခန့်
အီးခါးပတ်ပြေးမြန်နှုန်း: 0-60m / min
အက်ဖ်ထိန်းချုပ်မှု: နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း / နှစ်ဆ DC က brushless မြန်နှုန်းစည်းမျဉ်း
အိပ်ချ်နို့တိုက်ကျွေးရေးနိယာမ: အသိဉာဏ်ပွတ်တိုက်, အောက်ခြေပေးပို့။
J. ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန် - စက္ကူဘူး၊ ထုပ်ပိုးအိတ်၊ တံဆိပ်၊ စက္ကူ၊
K. ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: L * W * H = (60-300) * (30-400) * (0.05-3) mm
တိကျမှန်ကန်မှုကိုပြေးအယ်လ်ထုတ်ကုန်: ± 1.5mm
အမ်စက်ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း - သံမဏိသို့မဟုတ်ကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ဆေးသုတ်ခြင်း (အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်)
N. တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း - ကြမ်းခင်း၊ ပြင်ပအထောက်အပံ့။
O. စံဖွဲ့စည်းမှု: အသိဉာဏ်နို့တိုက်ကျွေးရေး & လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းပေါ်ကို & အော်တိုစုဆောင်းခြင်း။
P. optional function ကို: ကို double ထောက်လှမ်း, အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ရန်, အမြင်အာရုံစစ်ဆေးရေးစနစ်, အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခံရ။
အေအတိုင်းအတာ: L ကို * W * H ကို = 3600 * 763 * 820mm
အမ်စက်ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း - သံမဏိသို့မဟုတ်ကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ဆေးသုတ်ခြင်း （အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
O. စံဖွဲ့စည်းမှု - အသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်လေဟာနယ်စုပ်ယူသည့်အပိုပါအမြင့်နှင့်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အလိုအလျောက်စုဆောင်းခြင်း
ခအလေးချိန်: အကြောင်းကို 200-250KG
အီးခါးပတ်ပြေးမြန်နှုန်း: 0-100m / min
N. တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း - ကြမ်းပြင်ပေါ်မှအော့ဖ်လိုင်း၊ ကက်ဘိနက်အမျိုးအစား။
O. စံဖွဲ့စည်းမှု: အသိဉာဏ်နို့တိုက်ကျွေးရေး & လေဟာနယ်ပေါ်ကို & auto- စုဆောင်းခြင်း။
အေအတိုင်းအတာ: L ကို * W * H ကို = 4220 * 763 * 820mm
ခအလေးချိန်: အကြောင်းကို 250-300KG
power ပါဝါ: အကြောင်းကို 2.5KW
O. စံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ: အသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေး & လေဟာနယ်ပေါ်ကို & မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ပေါ်ကို & အော်တိုစုဆောင်းခြင်း
ရှေ့သို့ Feeding & TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး
နောက်တစ်ခု: TTO ပရင်တာနှင့်အတူစံ rewinder